Chate Sat | Reliable freelancers for your business Chate Sat has... - Chate Sat | Reliable freelancers for your business
# freelancing # funding # expansion
ချိတ်ဆက်လို့ လူသိများတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလွတ်တန်းပညာရှင် (freelancers) များကို ချိတ်ဆက်ပေးနေသော လုပ်ငန်း၏ မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Technoholic ကုမ္ပဏီသည် စင်ကာပူရှိ Angel Investors များထံမှာ ဒေါ်လာသိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးရှိ Pre-Series A ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကို ရယူလိုက်ပါတယ်။ Willy Ballmann နှင့် Keizo Fujitake တို့ ဦးဆောင်လိုက်တဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှာ လွန်ခဲ့သော ၂နှစ်မှ ကုမ္ပဏီ၏တန်ဖိုးကို ၆ဆ မြင့်တက်စေခဲ့ပါတယ်။
ဟန်နီမြဝင်းနှင့် ရွေှရည်မြဝင်း ညီအမနှစ်ယောက် စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ချိတ်ဆက် ဆိုတာဟာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလွတ်တန်းပညာရှင်များအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို ၂၀၁၆ခုနှစ်ကတည်းက ဖော်ထုတ်ပေးနေသော နည်းပညာအခြေပြု လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် Chate Sat က မြန်မာနို်င်ငံ၏ အလွတ်တန်းပညာရှင် (freelancers)များ ဈေးကွက်တွင် ဈေးကွက်ဦးဆောင်သူအဖြစ်ရှိနေပြီး လုပ်ငန်းများအတွက်လိုအပ်သော web and mobile developers များ၊ designers များ၊ digital marketers များ၊ content writers များ၊ animators များ၊ photographers များနှင့် promoters များ စသည့် အချိန်ပိုင်းအလုပ်အမျိုးအစားမျိုးစုံကို လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ်။
Chate Sat ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသော လုပ်ငန်းရှင်များဟာဆိုရင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံထဲမှာသာမက ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မလေးရှား၊ စင်ကာပူနှင့် အနောက်နိုင်ငံမာျးကပါ ပါဝင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကဲ့သို့ နေရာဒေသအစုံမှ လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အလွတ်တန်းပညာရှင် (Freelancers)ပေါင်း ၁၄၀၀၀ကျော်ဟာဆိုရင် Chate Sat ရဲ့ Website ပေါ်တွင် ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
“Chate Sat မှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နည်းပညာအခြေပြု စွန့်ဦးတည်ထွင်မှု ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက အကျိုးပြုနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ Chate Sat ရဲ့ ဈေးကွက်ကို ဦးဆောင်နေတဲ့အခြေအနေဟာဆိုရင် အနာဂတ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အလွတ်တန်းဈေးကွက်ရဲ့ အဓိကနေရာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။” လို့ Willy Ballmann မှ မှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ Willy Ballmann ဟာ စင်ကာပူ အစိုးရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့အစည်း GIC ၏ Portfolio Manager အဖြစ်လည်းကောင်း၊ Dymon Asia Capital တွင် Managing Partner နှင့် COO ရာထူးဖြင့်လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင်တော့ သီးသန့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတဦးအဖြစ် ရပ်တည်နေပါတယ်။ Keizo Fujitake ကတော့ ယခင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်လုပ်ငန်းရှင် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ချိတ်ဆက်ဟာ အဆိုပါ ဒေါ်လာသိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် မဲခေါင်ဒေသ (မြန်မာ၊ ကမေ်ဘာဒီးယား၊ လာအို၊ ဗီယက်နမ်) အတွင်း ထိပ်တန်း freelance platform တစ်ခုအဖြစ် မှတ်ကျောက်တင်နိုင်ရန် အားထုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ချိတ်ဆက်၏ အလျင်အမြန်တိုးတက်မှုများကို အထောက်အကူပြုရန်နှင့် အလွတ်တန်းဈေးကွက်တွင် ယှဉ်ပြိုင်မှုအနေအထားများကို ခြေကုပ်ယူနိုင်ရန် လူအင်အားနှင့် နည်းပညာအရင်းအမြစ်များ ထပ်မံတိုးချဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
“ကျွန်မတို့ရဲ့ မျှော်မှန်းချက်, စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ အလားအလာတွေကို နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအသိုင်းအဝိုင်းကပါ အသိအမှတ်ပြုကျတဲ့အတွက် အားရဝမ်းသာပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ freelance community ကို ပံ့ပိုးပြီး မြေတောင်မြှောက်ပေးနေတဲ့ ချိတ်ဆက်အနေနဲ့ အချိန်တိုအတွင်းမှာ များစွာသောတိုးတက်မှုတွေရရှိခဲ့ပြီး ဒီနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့အလျောက် အားသာချက်တွေနဲ့အတူ ကျွန်မတို့ရဲ့ အယူအဆတွေကို သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။” လို့ Technoholic ကုမ္ပဏီ၏ စီအီးအိုဖြစ်သူ မဟန်နီမြဝင်းမှ ပြောကြားပါတယ်။ သူမမှဆက်လက်ပြီး “ချိတ်ဆက် ခရီးစဉ်တလျှောက်လုံးမှာ Investor တွေဆီကလည်း စဉ်ဆက်မပျက်ထောက်ပံ့မှုတွေ ရရှိခဲ့သလို ဒီလို ခက်ခဲတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေမှာတောင် ကျွန်မတို့ချိတ်ဆက်ရဲ့တန်ဖိုးကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရတဲ့အတွက် အရမ်းလည်းအားရှိပါတယ်။”
ချိတ်ဆက်ဟာ ဖန်တီးရာ Accelerator အမှတ်စဉ် ၁ မှ အောင်မြင်ခဲ့သော startup တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀၁၆ စက်တင်ဘာလ Accelerator အမှတ်စဉ် ၁ ၏ ပထမဆုံးနေ့တွင် www.chatesat.com ကို စတင်လွှင့်တင်ခဲ့ပါသည်။ ၆လတာ အနီးကပ် Program အပြီး၊ ၂၀၁၇ ဂျူလိုင်လတွင် စင်ကာပူအခြေစိုက် Seed Myanmar (ယခင် Vulpes Investment Management), Theta Capital နှင့် ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ်ဦးတို့ထံမှ ကနဦးရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု seed funding ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ “၂၀၁၆ခုနှစ် စတင်လွှင့်တင်ထဲက ချိတ်ဆက်ရဲ့ တိုးတက်မှုကို အရမ်းကျေနပ်အားရမိပါတယ်။ ချိတ်ဆက်က လက်ရှိ မြန်မာမှာ စိတ်လှုပ်ရှားဖို့အကောင်းဆုံး နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေထဲက တခုဖြစ်ပြီး ခုထပ်မံရရှိလိုက်တဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာဆိုရင် ချိတ်ဆက်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ သူတို့ အောင်မြင်ဖို့ ဘယ်လောက်ထိ စိတ်အားထက်သန်တယ်ဆိုတာကို သက်သေထူလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်” လို့ ချိတ်ဆက်၏ ပထမဆုံး investor ဖြစ်သူ ဖန်တီးရာမှ စီအီးအို Jes Kaliebe Petersen မှ ပြောကြားပါတယ်။ ယခုနှစ်အတွင်းလည်း လက်ရှိရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု Pre-Series A round ကို အပြီးသတ်ရရှိရန် ပစ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Technoholic Pte Ltd, the parent company of Chate Sat Freelancing Platform, today announced that it has secured 6-digit funding in Pre-Series A Financing from angel investors in Singapore. Led by Willy Ballmann and Keizo Fujitake, the move drives the valuation of Technoholic6times higher than2years ago when the company was first funded.
Founded by two tech girls, Honey and Shwe Yee Mya Win, Chate Sat has been disruptively transforming the freelance marketplace of Myanmar since 2016. Chate Sat is the leading online freelance platform in Myanmar, connecting businesses and competent freelance professionals from various fields, such as web and mobile developers, designers, digital marketers, content writers, animators, photographers, promoters, etc.
The company has expanded its client base not only in Myanmar but also into Thailand, Malaysia, Singapore, and Western countries, acquiring over 14,000 freelancers to fulfill the needs of businesses and startups alike.
Willy Ballmann said “I believe investing in Chate Sat presentsagreat opportunity to boost Myanmar’s tech startup ecosystem. Chate Sat’s current market leading position firmly establishes the company to be the future centre and hub for Myanmar’s gig economy.” He isaformer Portfolio Manager at the Government of Singapore Investment Corporation (GIC) andaformer Managing Partner & COO at Dymon Asia Capital, currently working asaprivate investor. Keizo Fujitake is an ex-investment banker.
With this additional 6-digit funding, Chate Sat is ready to achieve its next milestone of becoming the top freelance platform in Mekong countries (Myanmar, Cambodia, Laos, Vietnam) and lead the company toanew stage of growth. The funds from this Pre-Series A will be further used to increase internal resources and accelerate talent recruitment to support the progressive growth of the Chate Sat community and to secure its competitive position in the freelance market.
Honey Mya Win, CEO of Technoholic, said “We are thrilled that our vision, enthusiasm and prospects have been highly recognized by the international investment community. Asapioneer in developing the freelance community in Myanmar, Chate Sat has undergone phenomenal growth inavery short period, which validates our unique positioning and the associated first-mover advantages we have gained asaresult. We have been extremely glad to receive continuous support from our investors and recognition of the value that our product provides, especially in this current tough economy.”
Being an alumni from Phandeeyar Accelerator Cohort 1, Chate Sat launched their product www.chatesat.com on the first day of cohort 1 in September 2016. After an intense six-month program, Chate Sat secured seed funding from Seed Myanmar (previously VIMIC), Theta Capital andaMyanmar-based angel investor in July 2017. Jes Kaliebe Petersen, CEO of Phandeeyar, which was Chate Sat’s first investor, said “I am very impressed with Chate Sat’s growth since their launch in 2016. They are one of the most exciting new tech companies in Myanmar at the moment, and the latest round of funding they have now received isatestament to their strong performance, and their determination to succeed.” The company is expected to close the round within this year.